Ogaden News Agency (ONA) – M/weyne Zuma oo ka Hadlay Baarlamaanka Ayaa Cambaareeyay Weeraradii Lagu Qaaday Ajnabiga
M/weyne Zuma oo ka Hadlay Baarlamaanka Ayaa Cambaareeyay Weeraradii Lagu Qaaday Ajnabiga
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo ka hadlay baarlamaanka dalkaa ayaa eedeeyay dhibaatada loo gaystay todobaadkan dadkii Afrikaanka ahaa ee ka shaqaysanayay magaalada Durban. Waxaana lagu dilay qalalaasahaa ugu yaraan shan qof .
Qalalaasaha ka socda magaalooyinka qaarkood ayaa loo aanaynayaa inay ka dambeeyaan siyaasiyiinta qaarkood iyo saxaafadda dalkaa oo markay ka hadlayaan dhibaatada shaqa la’aanta ah ee dhalinyarada haysata ku eedeeya qaxootiga faraha badan ee soo galay dalkaa oy ku sheegaan inay la wareegeen dukaamadii iyo dhaqaalihii hoose.
Waxaa si gaar ah loo tilmaamaa Wareysi joornaal kasoo baxa magaalada Durban oo la dhaho Mercury Newspaper uu la yeeshay Boqorka Qabiilka Zulu , King Goodwill Zwelithini, halkaasoo uu boqorka ku eedeeyay dadka Afrikaanka ah ee soo galay dalkiisa inay fursadihii shaqada kala wareegeen dadkii dalka lahaa, ayna tahay in dib loogu celiyo dalalkoodii. Hadalkaa laga sheegay Boqorka ayuu beeniyay, wuxuuna sheegay in algu been abuurtay. Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Boqorka ayaa lagu beeniyay, wuxuuna sheegay in boqorka nin ka socda uu ka qaybgali doono socodka uu Duqa magaalada Durban ku dhawaaqay inay ku mari doonaan wadooyinka ay ku cambaareynayaan dhibaatada loo gaystay dadka Afrikaanka ah.
Inkastoo ay xaaladda dagan tahay magaalooyinka kale ee dalkaasi, hadana waxaa jirta cabsi farabadan oo soo foodsaartay dadkii ajnabiga ahaa ee ka shaqaysanayay dalka Koonfur Afrika, waxaana jira qaar badan oo dukaamadoodii la boobay iyo qaar iska xidhay oo xeryaha booliska magangalyo u doontay.
Somalida oo ka mid ah dadka si fiican uga shaqaysta dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan dukaamada yaryar iyo meheradaha la xidhiidha ayaa qudhooda cabsi badan ay soo wajahday.